XOG: Maxay Barcelona u hakisay rabitaankii da’yarkan hibada badan? – Gool FM
XOG: Maxay Barcelona u hakisay rabitaankii da’yarkan hibada badan?
Kaafi November 4, 2016
(Glaskow) 04 Nov 2016. Barcelona ma sii amba-qaadi doonto xiisaha ay u qabto da’yarka hubada badan ee Celtic Karamoko Dembele cabsi ay ka qabto in mar kale ay FIFA ku soo rogto xanibaad suuqa ah awgeed, sidaas waxaa lagu qoray wargeys ka mida kuwa ciyaaraha ee Spain.
Kooxda reer Catalan waxaa lagu riday ganaax laba suuq kala iibsi 2014 kaddib markii lagu helay dambi ah in ay si xiriir ah ugu xad gudubtay qawaaniinta loo dejiyey marka lala soo saxiixanayo ciyaaryahanada da’dooda ka hooseyso 18-ka sano.
Barca waxaa ka go’an in ay ku soo xereyso tiro badan oo hibo yar yar ah kuliyadeeda caanka ah La Masia iyada oo ay dhawaanahan laga waayey xiddigo ka soo baramoosa oo safka kowaad soo gala, laakiin waxa ay la socdaan in loo baahan yahay u hogaansanaanta sharciga.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay ka tanaasulka la soo wareegida 13 jirka, kaas oo ay markii hore sahansadeen kana galeen arintiisa wadaxaajood sanad kahor.
Da’yarka wuu doonayey in uu ku biiro carruurta kooxda reer Spain, laakiin wadahadalada ayaa joogsaday kaddib markii ay dhawr jeer daawadeen sahanka kooxda isaga oo dheelaya tartan da’yar ah.
Dembele wixii intaa ka dambeeyey waxa uu markiisii ugu horreeysay matalay kooxda ay da’dooda ka hooseyso 20 jirada ee Celtic iyo waliba xulka Scotland ee da’doodu ka yartahay 16 jirada.
Waxaa iyana xiiseenaya kooxaha isku xifaaliya magaalada Manchester.
MASHAQADA INTER MILAN: Macallin la'aanta Inter oo maad laga dhigtay! + Sawirro
DAAWO: Fashiladii Manchester United oo dib ugu soo laabtay Manchester kahor kulanka Swansea